Bhegi Yekugezera Brushed Nickel Yakapararira
musha / Mabheji ekugezera / Kaviri Habata Bathroom Faucets / WOWOW 8 Inch Yakapararira Yekugezera Faucet Brushed Nickel
Rated 4.95 Kunze kwe5 yakavakirwa 20 kasitoma ratings
maviri kubata rakazara bhavhuet faucet inogona kusangana nezvinodiwa zvekuparadzanisa inopisa uye inotonhora mvura inoshandura, kusimudzira yekushongedza kwekushongedza, ndiyo yakanakira sarudzo iwe!
2320300 mirairo yekuisa
Bhavhu rekugezesa rakapetwa nickel yakapararira 2320300
Wanga uchiziva here kuti yako yekugezera pombi ndechimwe chezvinhu zvakakosha muzvinhu zvako zvekugezera maererano nedhizaini? Kunyangwe iwo ari iwo madiki, mapombi anogona kuve nemhedzisiro yakakura pane yako yekushongedza yekushongedza. Mabhomba emuchimbuzi ndiwo chaiwo echisimba mune chero dhizaini dhizaini. Izvi zvinoreva kuti kana mumwe munhu akapinda muchimbuzi, chimwe chezvinhu zvekutanga zvaanotarisisa, ndiwo mapombi ekugezera. Naizvozvo pombi yekugezera inogona kukanganisa zvakanyanya dhizaini yekugezera uye inofanirwa kusarudzwa zvine hungwaru.
Izvi zvinoratidza kuti iwe unofanirwa kusarudza yako yekugezera pombi zvakanaka. Iwe unogona kunge uine (capped) bhajeti yako yekugezera nyowani. Kazhinji tinoona kuti mapombi ekugezera haana kuiswa mukugadzirwa kwekutanga uye bhajeti. Mapombi ekugezera anowanzo sarudzwa chete pakupera kwemaitiro, nepo imba yekugezera yatove kuiswa. Zvinogona kuve zvakaoma kuwana pombi yekugezera inoenderana zvese zvaunofarira dhizaini uye bhajeti yako. Bhajeti yemabhaidhi inowanzo kupera mukupedzisira nekuda kwezviitiko zvisingafanoonekwe, uye iwe haudi kurerutsa pane dhizaini uye mhando kusarudza yako mapombi ekugezera. Kunyanya kana iwe uchiziva kuti aya mapombi ekugezera anogona kukanganisa zvakanyanya yako yekushongedza yekushongedza. Naizvozvo zvakanaka kuti uzive kuti WOWOW inokupa yakashongedzwa uye yakanakisa pombi dzemuchimbuzi nemitengo isingadhuri. Nekudaro, WOWOW inokupa iwe kukosha kwakanyanya kwemari.
Solid simbi yokugezera faucet bronze nickel yakapararira
WOWOW yekugezera pombi yakagezwa nickel yakapararira inogadzirwa nesimbi yakasimba. Iwe unozozviona ipapo iwe pawakabata pombi iyi yekugezera muruoko rwako. Iyo yekugezera pombi yakashongedzwa nickel yakapararira huremu 3.8 lbs iyo inoratidza hunhu hwayo pasina shred yekusahadzika. Unogona kuva nechokwadi chepamusoro chemhando yepamusoro yekugezera pombi ichagara kwemakore mazhinji, mazhinji. Zvirokwazvo, yakasimba zvinhu zvendarira zviri nani kwazvo kupfuura dzimwe simbi. Nemhando iyi yesimbi yezvinhu zvemukati haufanire kunetseka nezvematambudziko ekora semuenzaniso. Kunze kwezvo, zvemhando yepamusoro zvinhu zvinopa kugadzikana uye hwakanyanya hupenyu hwechigadzirwa. Hunhu hwako hwemvura huchave husina lead uye nekudaro sarudzo yakanakisa kune hutano hwako.
Kunze kwezvo, pombi yekugezera yakashongedzwa nickel yakapararira yaive yapedzwa nebrashi nickel pamusoro. Hakusi chete kuti kupedzisa uku kunopa kubata kwakanaka kune yako yekugezera dhizaini, zvakare kupfeka kusagadzikana. Iyo yekupwanywa nickel kupedzisa inodzivirira hunyoro uye kukwenya, izvo zvinoita kuti pombi yekugezera yakashongedzwa nickel yakapararira kukanda- uye tsvina? Yemahara. Naizvozvo ihwo hwakanakisa-kiyi yemhando yepamusoro mubathroom yako, iri nyore kuichenesa nekuipukuta nejira. Zvakareruka senge izvozvo!
Yakasikwa yakashongedzwa imba yekugezera faucet yakaiswa nickel yakapararira
WOWOW yekugezera faucet brake nickel yakapararira inoratidzika maviri maviri akapararira imba yekugezera faucet inosangana nezvinodiwa zvako kugadzirisa uwandu hwemvura inopisa uye inotonhora mvura zvakasiyana. Iyo yakapararira dhizaini saka inogadziriswawo kubva pamakumi mana kusvika gumi neshanu. Faucet inongoda gomba 4-hole uye daro rekuisa rinogona kugadziriswa kune zvaunofarira nezvido.
Iyo yakakwira mraba spout zvirokwazvo ndeye yakasarudzika dhizaini iwe yausingazooni mune mamwe akawanda ekugezera faucets aunowana mumusika. Mazhinji faini yekugezera fairi anotaridzika akafanana. Kuwana chimwe chinhu chakakosha nezvezvikomba kunogona kuve kwakaoma. Kunze kwekugadzirwa kwayo kwakashinga, kukwirira kwepasirose yekugezesa kwakasarudzika kunokupa mukana wakakwana pasi pespout yekupa nyaradzo yakanyanya. Naizvozvo iyi yakasarudzika yakasarudzika puranga rekugezera faucet inokupa iwe zviri zviviri chimiro chezvino uye nyaradzo panguva imwe chete. Sezvinei nezvokuita, hauzofanira kutambanudza maoko ako kure kuti usvike pakuyerera kwemvura. Izvo zvinoita kuti ive yakagadzikana kushanda.
Chinyoro chakashanda pekugezesa faucet bramm nickel yakafararira
Iyo 2 inobata ino yakanaka fairi yekugezera inokupa iwe mukana wekunyatso kudzora kuwanda uye kutonhora kwemvura. Iyo 2 inobata yakagadzirwa neiyo zinc zinc alloy uye inopa nyore uye zvakadaro yakanyatsogadzirwa-yakabata. Kwete chete imba yekugezera yakasungwa nickel yakafararira inogona kushanda mushe, zvakare chipuka pachacho chinopa iwo anenge mazana matatu madigiri kusvika. Naizvozvo unogona kumisa faini yekugezera yakamonyoroka nickel yakafararira nenzira yakagadzikana kwauri, uye unogona zvakare kuidzosera kumashure. Izvo zvinoita kuti zvive nyore kuchenesa imba yako yekugezera kunyura semuenzaniso.
Kunze kwekushanda kwayo kuri nyore, iyo yekugezesa faucet bramm nickel yakapararira inogona zvakare kuiswa nyore. Yayo yekugadzira yekukurumidza yekuisa chimiro yakasarudzika mumusika. Izvi zvinoita kuti zvive zvinobatanidza kubatanidza zvese zvinongedzo zvakachengeteka uye nyore nyore uri wega. Iyo inopisa uye inotonhora mitsara yemvura inosanganiswa neiyo inokurumidza-kuisa pombi iyo inogona kungo kubatanidzwa isina waya. Nehunyanzvi uhu zvakare une chokwadi chekuti pombi dzemvura dzako hadzizoputika. Iyo yekugezesa faucet brunch nickel yakapararira iri nyore kuisa pasina kushandisa pombi inodhura.
Warranty yekugezesa faucet yakaiswa nickel yakapararira
Pombi yekugezera yakashongedzwa nickel yakapararira inouya nezvinhu zvese zvinodiwa, kusanganisira kit yekuisa. Kunze kwepamusoro spout spout uye ayo maviri anobata, pasuru yacho inouya newawayway, 2 mapaipi emvura e2 cm emvura inotonhora uye inopisa, 50 pop up strain yekumisa uye seti yakazara yezvishandiso nematurusi.
Sezvo WOWOW inovimbisa kuti inopa yakanakisa kukosha kwemari, pombi yekugezera yakashongedzwa nickel yakapararira inouya neyekurumbidza 90 mazuva ekudzoserwa mari garandi. Kana iwe ukasazoshamiswa nekukosha kwemari yaunogashira, unogona kudzosera pombi yekugezera yakakweshwa nickel yakapararira pasina matambudziko. Iwe unovimbiswa kudzorerwa kuzere pasina chero mibvunzo yakabvunzwa. Kunze kwezvo, WOWOW inokupa iyo 3-gore garandi nguva. Kana pombi yako yekugezera yakashongedzwa nickel yakapararira ingadai isingaite sezvaungatarisira kuti iite, WOWOW ichatsiva pombi yako yekugezera neyechitsva. WOWOW inotora basa rayo zvakanyanya uye isu hatife takakusiya.
Zvakanakira imba yekugezesa faucet yakasarudzika nickel yakapararira muchidimbu:
• Yakasarudzika 7-chimiro dhizaini
• Masimbi makuru esimbi
• Kutsungirira kweupenyu hwese
SKU: 2320300 Categories: Mabheji ekugezera, Kaviri Habata Bathroom Faucets Tags: 2 Pazvibato, Bronze Nickel
Brass / Stainless Simbi / Zingi chiwanikwa
Kupisa / Mvura Inotonhora
Kukosha kukuru kwemutengo. Chidimbu chemutengo. Inotaridzika zvakanaka. Chiito pazvibato chakatsetseka uye chakasimba. Ziva kuti iyo spout haigone kutenderera. Ini handina kunyatso tsvagirisa izvo uye harisi dambudziko, asi vaye vandakatsiva vaive neicho chinhu.
Super nyore kuisa. Ingo chenjera paunenge uchibatanidza mutsara wekupa kuti ubate madonhwe ekupa. Shandisa zvipanera zviviri kuzvisimbisa pamwechete. Zvimwe kunze kweizvozvo, yakanaka chaizvo pombi. Zvakakodzera kutenga!
Ini ndaive pabhajeti yakaoma uye ndakazopedzisira ndasarudza iyi yangu yekugezera pombi. Ini ndinoda kukwirira uye yakapusa dhizaini, yakaiswa kweinenge mwedzi ikozvino uye inoshanda zvakakwana. Ini ndaikurudzira zvikuru!
tiri kugadzirisa imba yekuroja kuisa pamusika kuti titengese mwedzi unouya. Isu takatenga zvisina maturo zvekugezera kuchitoro chikuru chebhokisi asi mapombi akanyanya kuwedzerwa. Ndakavatarisa paWOWOW ndikafunga pane ino. Bhegi rakakura rinotarisa kunyanya pamutengo. Zviri nyore kwazvo kuisa uye zvikamu zvese zvataida zvaiverengerwa.
Iyi ndiyo yekupedzisira bomba rakanakisa remutengo! Iyo yese simbi ine yese-simbi kusundidzira-kumusoro uye pasi kudhiraina nebata rekubata! Hapanazve kuchenesa pombi mavhagi evhudzi!
Chimwe chezvinhu zvakanakisa zvekutenga kusvika zvino izvo zvakasimudza kutaridzika mune yangu yekugezera. Kurumidza kuendesa..easy kuisirwa. Hunhu hwakafanana newaungabhadhara zvakapetwa kuImba Depot. Tora kukosha kwese kwemari yako. Anofara kwazvo nekutenga kwangu.
Ndiri kufara kwazvo kuti ndakatsvaga online kuwana iyi pombi. Zviri pamutengo wakaderera pane uya waunowana mune hombe bhokisi zvitoro, uye isu hatina kubayira chero chinhu sekutarisa. Zvakanaka. Unogona kuzotengazve kubva kune ichi brand.
Kuisa kuri nyore chaizvo uye hunhu hwakanaka uye chimiro. Enzanisa nemamwe mabheti angu anobva kuHome Depot, iyi inofanirwa kutenga nemhando yepamusoro asi Hafu yemutengo. Yakakurudzirwa kushamwari dzangu futi
Ida iyo tepi. Kuisirwa kwaive nyore nyore kunze kwekunge taifanira kuwana mahure marefu ezvedu kunyura. Inotaridzika uye inonzwa zvakapetwa kaviri mutengo wakabhadharwa. Iyo faucet yaive yakarongedzwa zvakanaka inova diki diki asi yakaita kuti zvese zvinyatsonaka. Ndatenda!
Zviri nyore kwazvo kuzviisa. Uye kunyange ane magirovhosi atove mubhokisi. Zvinonditorera awa rimwe kubvisa zvekare :(. Uye maminetsi gumi nemashanu akaisa nyowani, btw ini handisi mupombi. Kupisa kana kutonhora vakazvinyatso kujekesa. Haikwanise kukanganisa. Pakazara, mutengo wakanaka
Pombi uye zvibato zvakauya zvakanaka zvakaputirwa kudzivirira kukwenya. Pombi nepombi zvese zvaigadzirwa nendarira kuti zvigare uye mitsara yaive yesimbi. Nekudaro, ini ndakadzorera iyi seti yeimwe hombe kukanganisa. Iyo yekugezera yaive hombe uye yaive yakakura kwazvo kune yakaenzana saizi saizi yekudonha gomba. Dhavha yekumisa yaigadzirwa nepurasitiki isina huremu, kwete simbi.
Kana mukomana wangu akatarisa zvese izvi zvikamu kekutanga, aive akatsamwa uye achipika. Asi panguva yaakapedza kuisa pombi, aive atorumbidza munhu akagadzira pombi uye akabvunza kuti nei zvese zvekugezera zvisina kunyatsonaka. Ndiri kufara kuti ndakasarudza iyi pombi. Pamusoro pekureruka, ini ndinofunga yakanaka. Aya ndiwo maitiro andanga ndichitsvaga.
Takatenga chigadzirwa ichi sechinotsiva chedu chekare faucet system, uye chigadzirwa ichi chakazadzisa zvese zvinotarisirwa uye kupfuura! Isu taida chimwe chinhu chinotaridzika sezvakanaka, asi chinokodzera mumba medu kushongedzwa / theme. Haisi chete iyo bhegi rinotaridzika kuva rakanaka, rinoshanda rakatsetseka uye rine inoshamisa kuyerera kwemvura. Ini ndakaisa ino sisitimu mukati maminetsi makumi maviri pasina chero mumwe rubatsiro. Ndingakurudzira chigadzirwa ichi kune chero munhu ari mumusika wepombi yekunyudza yemazuva ano isingaise gomba muchikwama chavo.
ini ndakatsiva yakanyanya kudhurirwa hans grohe (chiperengo) pombi neyuniti iyi. yakaiswa mumaminetsi gumi nemashanu. yakanyorovera, yakanaka vharuvhu chiito. dhizaini yakanakisa kudzivirira yekubata kufamba nezvimwe pamusoro petafura yegranite. kukosha kukuru. imwe faucet yandakatsiva yaive 15x mutengo weiyi. im anovaka imba, uye ndaisa ma5 emapombi. Mufaro!
Imba yekugezera. Ruvara uye dhizaini zvinotaridzika zvakanaka asi pombi yemvura inopisa yakanyanya kuomarara kuti isashanduke nyore uye inoita ruzha rwekutsvaira. Pombi yemvura inopisa inoshanda nemazvo. Ese mativi aive mubhokisi, uye ese aive nemashamba akakodzera uye akaiswa mushe. Iyo casing unit yeyese inopisa uye inotonhorera yemvura inobata yakavharwa saka haigone kuchinjika. Icho chakaremara gadzira. Zvikasadaro, iyo inotonhora mvura inoshanda kwazvo, asi kana iwe ukashandura mubato wemvura inopisa unosunga kwazvo uye unotswinywa wozobvumira mvura inopisa kuti ibude pombi.
Musiyano unofadza zvakadii uyu pombi waratidza nekusava nematuro kwangu! Yakapakirwa kwazvo, zvakanaka kuti musangano wakazara ubatanidzwe, zvakare yakagashira inoenderana sipo yekupa uye yekuchenesa machira. Chishandiso chinopihwa kumisikidza zvigadziko zvepasi, zvakare, zvakanaka kuti uve nekusimudza mabutiro paunenge uchiita kuchenesa kwakakwana kwehurongwa hwakaunganidzwa (hapana bhurosi rezino) Mutengo mukuru zvakare! Zvaita! Ini zvechokwadi ndaizodzoka kuzotenga mune ramangwana!
chinhu chacho chaitaridzika zvakanaka chaizvo. dambudziko roga nderekuti imwe yemapombi haina kugadzirwa zvakanaka uye yaikuya pese pawaibatidza kana kudzima. Ini ndaifanirwa kuita dzimwe shanduko kugadzirisa dambudziko. zvakare iyo pop dhureni haina kubuda zvakakwana kuti ibvumidze mvura kuyerera nekukasira zvakakwana.
Yakanaka kwazvo pombi inotaridzika inoita kunge yakanaka mhando. Takazvifarira zvekuti takaraira mamwe maviri kumatenzi edu ekugezera.
Isu tinofara nekutaridzika uye nekukurumidza kwatakatambira izvi. Kuisirwa kwaive kwakaoma asi zvakazara yaive mhinduro inodhura uye yakanaka yekutarisisa yekugezera.
Chigadzirwa chikuru! Super yakapusa kuisa uye dhizaini inoenda neyedu yekushambidza muenzi zvakakwana. Izvo zvinoshamisira kupfuura chero chinhu chatakawana pazvitoro zvemuno zvemahara uye mutengo wacho unotyisa!